Ungawasebenzisa Kanjani Amathegi Wakho Wesihloko we-SEO (Ngezibonelo)
Ubuwazi ukuthi ikhasi lakho lingaba nezihloko eziningi kuya ngokuthi ufuna ziboniswe kuphi? Kuyiqiniso… nazi izihloko ezine ezihlukile ongaba nazo zekhasi elilodwa ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe.
Isihloko Somaki - i-HTML ekhonjiswa kuthebhu yesiphequluli sakho futhi ikhonjisiwe futhi iboniswa emiphumeleni yokucinga.
Isihloko sekhasi - isihloko osinikeze ikhasi lakho ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe ukukuthola kalula.
Isihloko Sekhasi - imaki ithegi ye-H1 noma i-H2 phezulu ekhasini lakho evumela izivakashi zakho ukuthi zikuliphi ikhasi.
Isihloko Esimnandi Sokuphefumula - isihloko ofuna ukusikhombisa lapho abantu babelana ngekhasi lakho kumasayithi wezokuxhumana nabantu futhi okuboniswa ekubukeni kuqala. Uma amazwibela acebile engekho, izinkundla zokuxhumana zivamise ukuzenzakalelayo kuthegi yesihloko.
Imvamisa ngikwandisa ngakunye kwalokhu lapho ngishicilela ikhasi. Kwezenhlalo, ngingahle ngiphoqe. Ekusesheni, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi ngisebenzisa amagama angukhiye. Ezihlokweni, ngifuna ukunikeza ukucaciseleka kokuqukethwe okulandelayo. Futhi ngaphakathi, ngifuna ukwazi ukuthola ikhasi lami kalula lapho ngifunisisa uhlelo lwami lokuphathwa kokuqukethwe. Kule ndatshana, sizogxila ekusebenziseni i- ithegi yesihloko yezinjini zokusesha.
Amathegi wesihloko, ngaphandle kokungabaza, yizinto ezibaluleke kakhulu zekhasi uma kukhulunywa ngokufaka kahle okuqukethwe kwakho kokuqukethwe ngamagama osesho ofuna ukutholakala kuwo. Futhi ngothando lwako konke SEO… Sicela ubuyekeze isihloko sekhasi lakho lasekhaya kusuka ku- Ikhaya. Ngiyacika njalo lapho ngibona isiza lapho bengasebenzisi kahle isihloko sekhasi lasekhaya! Uqhudelana namanye amakhasi ayisigidi abizwa ngeKhaya!
Ingabe i-Google Ikhombisa Izinhlamvu Ezingaki Zomaki Wesihloko?
Ubuwazi ukuthi uma ithegi yakho yesihloko idlula izinhlamvu ezingama-70 ezingasetshenziswa iGoogle okuqukethwe okuhlukile ekhasini lakho esikhundleni salokho? Futhi uma weqa izinhlamvu ezingama-75, iGoogle izokwenza nje ungakunaki okuqukethwe ngemuva kwezinhlamvu ezingama-75? Ithegi yesihloko ehlelwe kahle kufanele ibe izinhlamvu eziphakathi kuka-50 no-70. Ngijwayele ukwengeza izinhlamvu eziphakathi kwama-50 nama-60 ngoba ukuseshwa kweselula kunganciphisa izinhlamvu ezimbalwa.
Ngakolunye uhlangothi lwesilinganiso, ngibona izinkampani eziningi zizama ukupakisha zifaka imininingwane eminingi engadingekile noma ebanzi kuzona isihloko tags. Abaningi babeka igama lenkampani, imboni kanye nesihloko sekhasi. Uma ukleliswa kahle ngefayela lakho le- amagama angukhiye abhalwe uphawu, izihloko akudingeki ukuthi zifake igama lenkampani yakho.
Kukhona okuhlukile okumbalwa, kunjalo:
Unayo umkhiqizo omkhulu. Uma ngingu New York Times, ngokwesibonelo, mhlawumbe ngifuna ukukufaka.
Wena badinga ukuqwashiswa komkhiqizo futhi unokuqukethwe okuhle. Imvamisa ngikwenza lokhu ngamakhasimende amancane azakhela udumo futhi abeke imali enkulu kokuqukethwe okuhle.
Unegama lenkampani empeleni ifaka igama elingukhiye elifanele. Martech Zone, ngokwesibonelo, ingasiza kusukela lapho I-MarTech igama eliseshwa kakhulu.
Izibonelo Zethegi Yekhasi Lasekhaya
Lapho Ngisebenzisa ikhasi lasekhaya, ngisebenzisa ifomethi elandelayo
amagama angukhiye achaza umkhiqizo wakho, insizakalo, noma imboni | Igama Lenkampani
I-Fractional CMO, Umxhumanisi, USomlomo, Umbhali, I-Podcaster | Douglas Karr
Khulisa Ukutshalwa Kwezimali Kwakho Kokuthengisa Nokukhangisa Kwakho | Highbridge
Izibonelo Zethegi Yekhasi Le-Geographic Page
Cishe ingxenye yesithathu yakho konke ukuseshwa kwe-Google okuhlobene nendawo kuhlobene nendawo ngokuya nge- Blue Corona. Lapho ngilungiselela i-Title Tags yekhasi lendawo, ngisebenzisa ifomethi elandelayo:
amagama angukhiye achaza ikhasi | indawo
Izinsizakalo Zokwakhiwa Kwe-infographic | I-Indianapolis, Indiana
Izibonelo Zethegi Yesihloko Samakhasi Esihloko
Lapho ngilungiselela i-Title Tags yekhasi lezindaba, ngisebenzisa ifomethi elandelayo:
amagama angukhiye achaza ikhasi | isigaba noma imboni
Ukusebenziseka Kwekhasi Lokufika | Khokha Ngokuchofoza Ngezinsizakalo
Imibuzo isebenza kahle ngesihloko somaki
Ungakhohlwa ukuthi abasebenzisi benjini yokusesha bathambekele ekubhaleni imibuzo eningiliziwe manje ezinjini zokusesha.
Cishe i-40% yayo yonke imibuzo yokusesha online e-United States ibiqukethe amagama angukhiye amabili.
Ukusesha okungaphezulu kwama-80% e-United States kwakungamazwi amathathu noma ngaphezulu.
Ngaphezu kwe-33% yemibuzo yosesho lweGoogle inamagama angama-4 + ubude
Kulokhu okuthunyelwe, uzothola isihloko sithi:
Ungayisebenzisa Kanjani Ithebhu Yesihloko Sakho ye-SEO (enezibonelo)
Abasebenzisi basebenzisa Ngubani, Yini, Kungani, Nini, futhi kanjani emibuzweni yabo yokusesha kakhulu kakhulu kunangaphambili. Ukuba nesihloko sombuzo esifana nombuzo wosesho kuyindlela enhle yokuthola izinkomba ngokuphelele nokushayela ithrafikhi ethile yokusesha kusayithi lakho.
Amanye amasayithi amaningi abhale ngamathegi esihloko futhi ithegi yesihloko SEO futhi anginasiqiniseko sokuthi ngiyoke ngincintisane nabo ngoba amasayithi abo abusa imigomo ehlobene ne-SEO. Ngakho-ke, ngingezile ngezibonelo ukuzama ukuhlukanisa okuthunyelwe kwami ​​bese ushayela ukuchofoza okuningi!
Akudingeki ube namahloni ngokusebenzisa izinhlamvu eziningi ngangokunokwenzeka. Ukusebenzisa amagama angukhiye agxile kakhulu kuqala, kulandele amagama abanzi ngokulandelayo, umkhuba omuhle kakhulu.
Ukusebenziseka Kwethegi Yesihloko kuWordPress
Uma uku-WordPress, amathuluzi afana ne- I-plugin ye-Math SEO plugin ikuvumela ukuthi wenze ngezifiso isihloko sakho seposi nesihloko sekhasi lakho. Lokhu kuhlukile. Ngesayithi le-WordPress, isihloko seposi sijwayelekile singaphakathi kwethegi yesihloko ngaphakathi komzimba wombhalo, ngenkathi isihloko sekhasi lakho kungukuthi isihloko tag lokho kuthathwe izinjini zokusesha. Ngaphandle kwe-plugin ye-WordPress SEO, kokubili kungafana. Isikhundla Math ikuvumela ukuthi uchaze zombili… ukuze ukwazi ukusebenzisa isihloko esiphoqayo nesihloko eside ngaphakathi kwekhasi - kepha nokho cindezela umaki wesihloko sekhasi kubude obufanele. Futhi ungabona ukubuka kuqala kwayo ngokubalwa kwezinhlamvu:
Ama-60% osesho lweGoogle manje asenziwe ngeselula ngakho Isikhundla Math futhi inikeza ukubuka kuqala kweselula (inkinobho yeselula ephezulu ngakwesokudla):
Uma ungenayo i-plugin lapho ungakhulisa khona amazwibela akho acebile ezokuxhumana nabantu, isihloko tags zivame ukukhonjiswa yizinkundla zokuxhumana lapho wabelana ngesixhumanisi.
Thuthukisa isihloko esifushane, esicindezelayo esishayela ukuchofoza! Gxila kumagama abalulekile kulokho okholelwa ukuthi isivakashi sizogxila kukho hhayi okunye. Futhi ungakhohlwa nokwandisa incazelo yakho ye-meta ukushayela umsebenzisi wakho wokusesha ukuze uchofoze.
Ithiphu le-Pro: Ngemuva kokushicilela ikhasi lakho, hlola ukuze ubone ukuthi ukala kanjani emasontweni ambalwa ngethuluzi elifana nalokho Semrush. Uma ubona ukuthi ikhasi lakho likleliswe kahle ngokuhlanganiswa okuhlukile kwamagama angukhiye… bhala kabusha ithegi yakho yesihloko ukuze uyiqondise eduze (uma kufanelekile, kunjalo). Ngikwenza lokhu ngaso sonke isikhathi kuma-athikili ami futhi ngibuka amazinga wokuchofoza ku-Search Console akhula kakhulu!
Ukuzikhulula: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana Semrush futhi Isikhundla Math ngenhla.
Tags: htmlukuthuthukisaisihloko sekhasiizinga izibalo seoukusebenzisa ngokugcwele injiniseoisihlokoizinhlamvu zethegi yesihlokoamagama angukhiye wethegi yesihlokoithegi yesihlokoUkulungiselela ithegi yesihlokoithegi yesihloko amazwibela acebileithegi yesihloko lokhoisihloko tagsamagama emibuzweni yokusesha
Okthoba 16, 2012 ngo-9: 34 AM
Ithegi yesihloko iyinto ebaluleke kakhulu ye-meta futhi iyisici sokuma. Amawebhusayithi amaningi enza iphutha lokuchitha lesi sikhala ngokusebenzisa igama lenkampani kuphela. Kufanele isebenzise amagama asemqoka ukuchaza okukuleli khasi.
Nov 1, 2012 ngo-1: 21 AM
okuthunyelwe okumangalisayo nemininingwane… Ngokuzayo, lokhu kungabizwa ngokuthi yi-Bible of Title Optimization! Ihlombe ..
Nov 1, 2012 ngo-1: 38 AM
Kwaziswa kakhulu @wiseStep!
May 14, 2013 ku-3: 36 PM
Angifuni ukuqhubeka nesihloko sami sebhulogi ngemuva kwesihloko sekhasi lami kepha angazi ukuthi ngikwenze kanjani. Ngisebenzisa i-plugin ye-All In One Seo Pack futhi bengisuse i-% blog_title% eyayingemuva kwe-% page_title%, okwamanje i-% page_title%. Kepha kusaqhubeka. Ku-header.php ikhodi yesihloko ithi, futhi kusihloko se-page.php ngu-. Yini okufanele ngiyenze, ngakho isihloko sebhulogi ngeke siqhubeke ngemuva kwesihloko sekhasi.
May 14, 2013 ku-4: 00 PM
Ngingathumela ngokuthembeka izilungiselelo zakho kusuka ku-All In One SEO Pack Plugin bese ngifaka i-Yoast SEO Plugin yeWordPress. Ungangenisa amasethingi lapho futhi lokho onakho ngenhla kufanele kusebenze.